Ukwakhiwa kwe-ovini kuvame ukuhlotshaniswa nezindlu zemizi, amakamelo okugeza kanye namakamelo okushisa. Kulesi simo, kunezinkampani ezahlukene zokushisa ezikulolu hlobo, ezinye zazo zibandakanya imishini yezakhiwo zanamuhla. Eminyakeni yokuqala yokuthandwa kwayo, isitofu esenziwe nge-cast-iron kwakubhekwa njengemvelo yemikhaya yedolobha. Akazange ahlanekeze ingaphakathi nhlobo, futhi waze wanikeza uphawu olukhethekile lwe-stylistic ngenzuzo. Kodwa ezinsukwini zethu zokushisa kwezobuchwephesha nobuchwepheshe, isimo sesishintshile, futhi imiklamo enjalo ivame ukunikezwa kuma-dachas, besebenzisa izidingo ezidingwa yi-utilitarian kuphela.
Imfihlo yokuthandwa kwamafomu anjalo ngokuyinhloko i-multifunctionality yabo. Ngakolunye uhlangothi, ukuhlinzekwa kwemisebenzi yokushisa ngokuqondile, futhi ngakolunye uhlangothi - kungenzeka ukupheka okusheshayo. Ukuzivocavoca kubonisa ukuthi kungenzeka kakhulu ukushisa igumbi elifinyelela ku-60 m 2 ngesitofu esiphakathi. Njengedivayisi yokupheka ukudla, izinhlobo ezinjalo zisetshenziswa kancane kancane, kodwa uma kunesidingo, lo msebenzi ungenziwa. Kulabo abakhetha ukuklama ngale njongo, isithando somlilo sizohlonywa ngesitofu sensimbi esine-hori kanye nesiteji esincane sokudla. Futhi ama-burners angaba amaningana - kuye ngokuthi ubukhulu bomthamo othile. Kweminye ukuguqulwa, ukhetho lokushisa okungeziwe olunikeziwe luhlinzekwa. Ngenxa yalokho, ukuhlanganiswa kwemisebenzi emibili ye-turbocharger kunqunywa ukuthi kuyasebenza futhi kulula ukusebenza.
Idivayisi kanye nomgomo wokusebenza weyunithi
Umklamo weklasi uqala ukuba khona komzimba womzimba, lapho izakhi ezisemqoka zisebenza khona. Ngokuvamile zimelelwe ikamlilo lesithando somlilo kanye ne-ash pan - ngokulandelana, isithando somlilo sineminyango emibili. Ngomunye, izinkuni zibekwa, futhi umnyango ophansi ukhonza ukuqoqa umlotha. Ingxenye engenhla yesakhiwo inikezwa ipayipi legatsha, elihlanganiswa nesistimu ye-chimney. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi isitofu esenziwe ngensimbi asisakazelisi intuthu kuyo yonke ikamelo, ukwahlukana okwehlukanisa ikamelo lokushisa emlilweni ovela emgodini we-chimney kunendawo ebhekene ne-perforated surface. Ngenxa yesisombululo esinjalo, ukuhanjiswa kwomoya okwanele kunikezwa ukuhoxiswa okulinganiselwe nokuphumelelayo kwemikhiqizo yomlilo. Isici sesici sokwakhiwa kwe-burzhuek yingxenye ephansi nemilenze ephakeme. Lokhu kungenye yezinto ezibonakalayo kakhulu ze-burzhuyka ezitokisini zendabuko nasemiphakathini yomlilo. Umklamo onemilenze awudingi ukufakwa kwesisekelo esikhethekile, futhi lokhu akusho ukuthi kugcinwe ukuthi kungenzeka ukunyakaza kweselula.
Amamodeli ahlukene e-burzhuek eziciweni zokuklama, amakhono okusebenza kanye nefomu. Eqinisweni, singakwazi ukuhlukanisa izinhlobo ezintathu eziyinhloko zamayunithi anjalo. Lawa angamamodeli asekhaya ahlala ezindaweni zokuhlala, amabutho nokuguqula ukuguqulwa. I-version yokuqala ibonakala ngobukhulu obukhulu, izinhlobo ezihlukahlukene, kanye nokuba khona kwama-burners amaningana kanye nokwenziwa kokuqala kwe-stylistic.
Futhi, ibutho le-cast-iron lensimbi lifana nenguqulo yangaphambilini mayelana nokusebenza, kodwa inamanani amancane. Lolu khetho luhlose ukunciphisa ukusingatha kanye nekhono lokunikeza ukushisa okusheshayo ezindaweni ezincane. Ngokuqondene nokuhamba kwe-burzhuyek, kaningi babe nezilinganiso ezinesizotha kakhulu, kodwa futhi kungasikisela ukuthi kungenzeka ukupheka. Lezi zinhlobonhlobo zibhekene nesisindo esincane futhi, kwezinye izimo, ukwakhiwa okunamandla kwemilenze.
Amamodeli wempi namasosha ayabhubhisa abasebenzisi ngomhlobiso okhethekile. Kubo into eyinhloko iwukusebenza, ukuhamba nokuzithoba ekusebenzeni. Kodwa-ke, ama-aggregates aklanyelwe ukusetshenziswa ezindaweni zokuhlala noma izindlu zokuhlala ezifanayo namanje ahlukaniswa ngokukhona kwezici zokuhlobisa ezindaweni. Ngokuvamile, izinhlobo ezinjalo zenziwe ukuba zihlelwe, okuvumela umnikazi wesikhathi esizayo ukuba akhethe ukuqondiswa kokuklama stylistic kusengaphambili. Ngaphezu kwalokho, i-cast-iron ingenza umsebenzi owodwa wokuhlobisa futhi ungasetshenziselwa ukushisa. Lo mkhuba wokusebenza uvamile phakathi kwabadlali bezitayela ze-Retro ngaphakathi.
Izimpendulo ezihle mayelana ne-burzhujki
Ukuzikhandla, ukwethembeka nokungabikho kwezidingo ezikhethekile mayelana nokugcinwa yizinzuzo eziyinhloko lapho abanikazi balubiza khona i-burzhuyki yabo. Ngokwalo, i-iron yakhiqiza ukudala ukuqina kwezakhiwo, ngakho-ke uma isithando somlilo sidingeka isikhathi eside sokusebenza, enye yezinhlobo zalolu hlobo ingasetshenziswa ngokuphepha. Ngesikhathi esifanayo, abasebenzisi kanye ne-ergonomics bayaphawulwa. Ngisho nokushisa okukhulu kwensimbi ne-burners kugcina ikhono lokuhamba ngaphandle kwesidingo sokungena ngaphakathi kwendwangu. Okunye okuwukuthi kanye nokufuduka kweyunithi, ukubuyekezwa kwesimo se-chimney kuyodingeka. Abasebenzisi abagxilile be-burzhuek kanye nezinzuzo ze-stylistic okukhulunywe ngenhla, kodwa kule ndaba impahla ebaluleke kunazo zonke yindlela yokubonisa ilangabi elibukhoma, elinikeziwe kwezinye izinguqulo.
Iningi lezimangalo kumabhishobhi lithinta ukuhluleka kwensimbi ukuqoqa ukushisa. Lokhu kusho ukuthi isitofu sizokwazi ukuhlinzeka ngokufudumele okusheshayo futhi okusheshayo ekamelweni ngisho nangendawo enkulu, kodwa ngemuva kokuphela komlilo, kuzopholisa ngaphakathi kwengxenye yehora. Futhi lokhu akusebenzi nje kuphela ezakhiweni zensimbi-abasebenzisi bezinhlobonhlobo zensimbi ezingenasinhla babhekisela emuva okufanayo. Lapha kubalulekile ukuphawula kanye nokunye okungajabulisi okushiwo yi-burzhuyki ensimbi.
Ukubuyekezwa kuncoma indlela enomthwalo wemfanelo yokuphepha komlilo, ngoba ubuso bezakhi ezinjalo zokushisa kushisa kakhulu. Ngakho-ke, kubalulekile ukuvikela izilwane nezingane ekamelweni, futhi uma kungenzeka, susa izinto ezivuthayo nezinto ezivela endaweni yunithi. Nakuba abakhiqizi bezinhlobonhlobo zanamuhla bathi izindwangu ezikhethekile zokuzivikela zensimbi, ekugcineni zilahlekelwa umsebenzi wazo.
Isamba se-iron-iron sibiza kangakanani?
Imiklamo elula kakhulu ihluke kakhulu ngentengo yeningi yentando yeningi, engaba phakathi kwama-rubriki angu-5-10 ayizinkulungwane. Le ngxenye, ikakhulukazi, imelela amamodeli afanayo namabhanoyi afanayo. Amayunithi asayizi obugcwele abiza kakhulu - angaba ngu-15-20 000. Kulesi simo, singakwazi ukukhuluma ngekhwalithi yezinklamo nezindlela eziningi zokusebenza. I-tower enkulu ye-cast-iron iron tower ne-decoration yomlobi ingadla izindleko ezingu-40-50. Lezi yizibonelo zanamuhla ezinikezela ubuchwepheshe bamuva, okuphakathi kwezinye izinto, ezivumela isimiso sokushisa isikhathi eside ekamelweni lokushisa.
Ekukhethweni kwe- burzhuyek ye-dacha kufanele kuxhomeke ekutheni umsebenzi ohleliwe uhlelwe kanjani. Uma imodeli kufanele ibhekane nayo, ikakhulukazi ngomsebenzi wokushisa, ukunakekelwa kubhalwa ubukhulu besakhiwo kanye nokutholakala kwamapayipi akhethekile ukwandisa ukudlulisa ukushisa. Izindwangu zanamuhla zensimbi zamadaka nazo zenzelwe ukusetshenziswa ezimweni zokuhamba. Ezinhlobonhlobo ezinjalo, izindawo zokuhamba nokukhanya zivela phambili.
Yiqiniso, isici esibalulekile esivela ekubukeni kokusebenzisa isitofu e-dacha yiyona ndlela yokupheka. Lo msebenzi unikezwa ama-burners. Ngaphezu kwalokho, lapho uthenga i-burger ngeke kube yinto engafanele ukuhlinzekela ukutholakala kwezinsiza ezihlukahlukene zokusiza isithando esifanayo nesomlilo.
Ekumeni Mussorgsky - izinyathelo zokuphila umqambi omkhulu sika